Fiidiyow qarsoodi ah ayaa xaqiijinaya joogitaanka Huawei P10 ee MWC | Androidsis
Waxaan jecelahay inaan iftiimino wararka qaar tanina waxay la xiriirtaa mid ka mid ah halyeeyada Shirweynaha Caalamiga ee Mobilka. Taasi sidaa darteed munaasabad sanadle ah oo gaar ah oo lagu qabtay magaalada Barcelona dhamaadka bisha iyo sanadkaan maqnaanshaha mid ka mid ah xiddigaha dhalaalaya ee koonka Android, Galaxy S8, ayaa noqon doona mid aad loo ogaan karo.
Laakiin sidaad u dhihi lahayd, boqorkii dhintay, boqorka ayaa dhigay, waana halkan meesha LG G6 iyo Huawei P10 ay ka soo galaan. Waa tan dambe ee mar labaad xaqiijineysa joogitaankiisa Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka iyada oo leh fiidiyow cajaa'ib leh. Waxa ugu xun oo dhan ayaa ah inaadan arki karin Huawei P10 fiidiyowgaan, inkasta oo fariin.
Fiidiyowgaas teaser-ka ah ee la daabacay, waxaad ka heli kartaa ereyada: «Beddel sida adduunku kuu arko». Hadalkaas kudar sawir hashtag iyo laba indhood. Tani waxaa loo maleynayaa inay la xiriiri karto labada kamaradood, sida kuwa LG G6 iyo ka horreeyay, Huawei P9.
Huawei P10 waxaan ka helnay warar xan ah oo kala duwan usbuucyadan oo dhan. Waxaa la sheegay in waxaa jiri doona laba nooc: P10 iyo P10 Plus. Labadaba waxaa lagu aqoonsan doonaa iyagoo wata shaashad Q5,5 XNUMX inji ah, marka laga reebo nooca loo yaqaan 'Plus' oo ah meel aad u xiiso badan sida dhinacyadeeda qalooca sida Galaxy gees.
Qeybta dambe waxaa lagu qalabeyn doonaa qalab ka fiican, sida oo kale 4 ama 6 GB oo RAM ah iyo 32 ilaa 128 GB keydinta gudaha. Markaa waxaan lahaan doonnaa terminal gaar ah oo qeexaya isla markaana leh muraayadaha 'Leica lenses' oo runtii soo jiidan doona indhaha dad badan. Waxay noqon doontaa 26-ka Febraayo markaan ogaan doono haddii macluumaadkan oo dhan ay sax yihiin markii la soo bandhigo hal maalin kadib marka si rasmi ah loo furo albaabada MWC.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Huawei ayaa bilaabi doonta taleefannadeeda casriga ah ee P10 ee MWC
Samsung ayaa ka bilaabay Samsung Calculator Dukaanka Play Store
Barnaamijkan cusub ee fiidiyowga ah ee Facebook ayaa goor dhow u imanaya Samsung Smart TVs